Gal - Rikoooo
Ku daabac waxyaabahaaga Rikoooo
Markii ugu dambeysay ayaa cusboonaysiiyay on 11 May 2020 .
Waxaan had iyo jeer raadineynaa wax cusub add-ons si loogu daabaco Rikoooo.com. Haddii aad tahay hal abuure Flight Simulator waxsoosaarka aadna rabtid inaad ku dhajiso abuurkaaga boggayaga, ha ka labalabeyn inaad nagala soo xiriirto farriinta Facebook.
Fadlan la soco in nidaamkayaga soo dejinta ee maaddada ah uu u shaqeeyo si ka duwan bogagga kale ee internetka. Codsiyada oo dhan waxaa gacanta ku haya kooxdeena. Xaqiiqdii, dalabkaagu waa inuu buuxiyo shuruudaha soo socda:
Waa inaad noqotaa abuuraha Rabbiga add-on inaad jeceshahay inaad geliso ama aad ka heshay rukhsad abuuraha asalka ah oo aad awoodid inaad caddeyso.
Gawaarida oo dhami waa inay ahaadaan kuwo dhameystiran, taas oo ah in lagu dhawaaqo dhawaqyada, isbeerin qaali ah iyo qaabab xalin wanaagsan. Moodooyinka gawaarida, dhismayaasha ama alaabada kale waa inay la socdaan xaqiiqda.
Waad aqbashaa in nuxurkaaga lagu rakibay qalab rakibayaal ah oo otomaatig ah haddii loo baahdana wax laga beddelo si loogu habeeyo qaabkan.
Waxaan ilaalinaa xuquuqda aan ku diidno codsigaaga sida ku saleysan shuruudahayaga tayada. Qeexitaan ahaan, Rikoooo waa bog internet bixiya adeegyo tayo sare leh iyo howl qabad leh.
- Nuxurkaaga ayaa u helli doona dhagaystayaal fara badan isla markaana hela aragti.
- Bogga bogga leh waxa ku jira ayaa lagu iftiimin doonaa Raadinta Google waxaana lagu soo bandhigi doonaa natiijada bogga koowaad ee Google (Thanks to our SEO-ga aadka u fiican).
- Bogga internetka ee maamusha waxyaabahaaga waxaa loo tarjumi doonaa in ka badan 64 luqadood.
- Qalabkayaga fudfudud, wax lagu beddeli karo iyo xirfad-yaqaanka tooska ah wuxuu u wada qabanayaa shaqada dhammaan isticmaaleyaashaada.
- Waxaan ka taxadarnaa abuurista bogga kaas oo martigelin doona waxyaabahaaga, oo ay kujirto tilmaan ay kujirto dhammaan macluumaadka daruuriga ah.
- Waxaad aragti ka heli kartaa faallooyinka isticmaale ee Facebook adoo adeegsanaya websaydhka oo ka jawaabi kara iyaga.
Mahadsanidin kooxda Rikoooo.